/ဘ‌‌လော့ခ်/ခံတွင်း turinabol/ခံတွင်း turinabol အမှုန့်: သင် Steroid တစ်မျိုးအမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိသလား?
အပေါ် Posted 12 / 17 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ခံတွင်း turinabol. ဒါဟာရှိပါတယ် 1 မှတ်ချက်.
1.What ခံတွင်း Turinabol ပါသလဲ 2.Oral turinabol အမှုန့်သမိုင်း
3.What ခံတွင်း turinabol အမှုန့်ဖြစ်သနည်း 4. Oral turinabol အမှုန့်မှမည်သည့်အရာနှင့်တူသနည်း။
5.How ခံတွင်း turinabol အကျင့်ကိုကျင့်သနည်း ကာယဗလများအတွက်ခံတွင်း turinabol ၏ 6.Benefits
7.What ခံတွင်း turinabol ၏အားသာချက်များလား ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံတွင် turinabol နှင့်ထိုးဆေး turinabol ၈။
9.Oral turinabol ထိုးခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး ခံတွင်း turinabol ၏ 10.Recommend သောက်သုံးသော
ခံတွင်း turinabol ၏ 11.Medical သောက်သုံးသော ကာယဗလများအတွက်ခံတွင်း turinabol ၏ 12.Dosage
အမျိုးသမီးများအတွက် 13.Oral Turinabol?
ခံတွင်း turinabol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ခံတွင်း turinabol အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: ခံတွင်း turinabol အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 125 - 127 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ခံတွင်း Turinabol ကဘာလဲ?
ခံတွင်း Turinabol(Chlorodehydromethyltestosterone ကိုလည်း '' Tbol 'နှင့် Turinabol အဖြစ်လူသိများ), များအတွက်စီးရီး testosterone ပိုင် ကာယဗလ(အတူတူပင်ကျော်ကြားနဲ့တူ testosterone ဟော်မုန်း enanthate ), (တကယ် Dianabol တစ်ပြုပြင်ထားသောပုံစံဖြစ်ပါတယ်Methandrostenolone), မထွက်ရကအမှန်တကယ် Dianabol များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် Clostebol (4-chlorotestosterone) ။ အမှန်တကယ်ဓာတုနာမကိုအမှီ 4-chlorodehydromethyltestosterone သည်အဘယ်ကြောင့်ထို့ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံရန်ပြုပြင်မွမ်းမံက Non-aromatizable ဖြစ်ခွင့်ပြုပါနှင့်လည်း Turinabol တစ်ဦး '' အပျော့စား Dianabol '' အဖြစ်ချစ်စနိုးထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ဖွယ်ရှိသောအရာသည်အလွန်နိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်, အပိုင်။
ခံတွင်း Turinabol (OT) methandrostenolone မှဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အလွန်ဆင်တူသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်, တကယ်တော့, C-4 အနေအထားမှာကလိုရိုက်အက်တမ်များ၏ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်း-turinabol အလွန်ကောင်းသော Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါကလိုရိုက်အက်တမ်များ၏ထို့အပြင် aromatase သောအခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်မွှေးကြိုင်များအတွက်အလားအလာဖယ်ရှားပေးနှင့်လည်း DHT ဖို့ဘာသာပြောင်းလျော့နည်းစေသည်။ အဓိကကွဲပြားမှု OT ဖွယ်ရှိသည်၎င်း၏နိမ့်စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့နှင့်ခံတွင်း Turinabol တက်သည်ကိုတာရှည်ဝက်ဘဝစောင်ရေသို့ငြာခံရ Testosterone နဲ့အီစထိုဂျင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် methandrostenolone ထက် SHBG အဘို့အမြင့်မားဆှဖှေဲ့ရှိသည်ဖို့ပုံရသည်ရှိကြောင်းဖြစ်ကြသည်။
ခံတွင်း turinabol အမှုန့်သမိုင်း
Oral Turinabol သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်အရှေ့ဂျာမနီမှ Jenapharm မှပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ steroid သည်အမျိုးသားများသာမကအမျိုးသမီးများနှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိကလေးသူငယ်များတွင်သာမကဆယ်စုနှစ်များစွာလုံခြုံစိတ်ချရသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ ဒီ anabolic steroid (AS) ပြင်းထန်ပြဿနာများမရှိဘဲပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်အရိုးထုထည်ကိုတည်ဆောက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အားထုတ်မှုအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အရှေ့ဂျာမန် Steroid တစ်မျိုးအရှုပ်တော်ပုံအများပြည်သူအသိပညာဖွစျလာတဲ့အခါသို့သော်ခံတွင်း Turinabol အဆိုပါ 1990 ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိလိမ့်မယ်။
1974 ကနေအရှေ့ဂျာမန် Doping စက်အဖြစ်လူသိများမည်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်အရာကို 1989 ရန်၎င်း၏အိုလံပစ်အားကစားသမားမှဟို steroids စီမံခန့်ခွဲအောင်မြင်ခဲ့သညျ။ သူတို့လိမ်ခံခဲ့ရပေမယ့်ခံတွင်း Turinabol တူသော steroids သိရှိနိုင်ထိုအခြိနျကတညျးအဖြစ်သူတို့ကအတူကွယ်ပျောက်လာပြီခဲ့ကြသည်သာ။ ဒါကြောင့်တရားဝင်လူသိများခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ပြည်နယ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ 14.25 လည်းမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် testosterone ဟော်မုန်းဖတ် skew နိုင်ရန်အတွက်ဒီကာလအတွင်း epitestosterone ၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်လိမ့်မယ်။
ခံတွင်း Turinabol ဂျာမန်အရှေ့အရှုပ်တော်ပုံ Jenapharm 1994 အတွက်ထုတ်ကုန်ကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းမယ်လို့၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အခါ။ နှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဆေးဝါးအင်အားကြီးဂျာမနီ Schering ထဲက Primobolan, Testoviron နှင့် Proviron ကဲ့သို့သော steroids ၏ထုတ်လုပ်သူ Jenapharm ဆည်းပူးပေမယ့်နောက်ကျောစျေးကွက်မှခံတွင်း Turinabol ရောက်စေဖို့ကိုရွေးတော်မလိမ့်မည်။ ထိုကာလကတည်းကဒီဟို Steroid တစ်မျိုးစစ်မှန်သောဆေးဝါးဒီနေရာမှာ entity ကထုတ်လုပ်ဖူးပြီးတင်းကြပ်စွာမှောင်ခိုစျေးကွက်မြေအောက်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်လာသည်။
ခံတွင်း turinabol အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
ခံတွင်း turinabol ကုန်ကြမ်း, မူးယစ်ဆေးခံတွင်း turinabol များ၏ကုန်ကြမ်း, အမှုန့်မှအဖြူရောင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်, များစွာသော ananboloc steriods ထုတ်ကုန်ပေးသွင်းများသောအားဖြင့်, ထို့နောက်ပါးစပ် turinabol tablets.In ဈေးကွက်သို့ဖြစ်စေလျက်, ခံတွင်း turinabol ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မြင့်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခံတွင်း turinabol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ် ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဘိုးနှင့်, 60% -99% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမှအထိ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်ခံတွင်း turinabol အမှုန့်များ၏အသေးစိတ်:
အမည်: ခံတွင်း turinabol
ပျော်ဝင်: ရေသို့မဟုတ်အရက်ထဲမှာပျော်, Acetic acid ကို, ethyl Ester အတွက်ပျော်ဝင်
စတင်ချိန် - ၂၀ မိနစ်
grade: ဆေးဝါး grade
Oral turinabol အမှုန့်ကဘာကိုထူးခြားသလဲ။
ဈေးကွက်ထဲမှာရှိကွဲပြားခြားနားသောခံတွင်း turinabol ဆေးပြားများကဲ့သို့ပါးစပ် turinabol ၏ပုံစံ, တက်ဘလက်နှင့်ခံတွင်း turinabol capsule.They ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းစျေးကြီးကြီးသားအပေါင်းတို့, powder.You အလွယ်တကူဒေသခံစျေးဆိုင်အချို့ခံတွင်း turinabol တက်ဘလက်မဝယ်နိုင်ခံတွင်း turinabol မှလာနေကြသည်သို့မဟုတ် ok ပါလိမ့်မည် online.That ခံတွင်း turinabol အမှုန့်ကိုဝယ်ကြလော့။
ဘယ်လိုခံတွင်း turinabol အကျင့်ကိုကျင့်သနည်း
Dianabol (Methandrostenolone) ၏ပြုပြင်ထားသောပုံစံအဖြစ်ခံတွင်း Tbolworks; Dianabol နှင့် Clostebol ပေါင်းစပ် (4-chlorotestosterone) က၎င်း၏ယေဘုယျဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ Dianabol ဆင်တူသည်သည့်, တကအများကြီးပျော့ hormone.While Tbol Dianabol နေဆဲတိုးမြှင့်ကြောင်းစတီရွိုက်နှင့်အတူဆက်စပ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ, အမျိုးမျိုးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်းထက်အားနည်းဖြစ်ပါသည် oestrogen.This သင်အံ့မခန်းမဟုတ်ပိန်ကြွက်သားလာဘ်လျှင်မည်သည့်ဖောင်း, ရေ retention ကိုသို့မဟုတ် gynecomastia ကြုံနေရခြင်းမရှိဘဲ, တည်ငြိမ်ကြည့်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျဆိုလိုသည်။
တစ်ဦး functional ဖြစ်စေအခြေခံတွင်ခံတွင်း Turinabol ၏စရိုက်များအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးလိုပဲ ဟို steroids ဒါကြောင့်တစ်ဦးအပြုသဘောပရိုတိန်းပေါင်းစပ်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုအဖြစ်သွေးနီဆဲလ်အရေအတွက်တိုးပွားလာရှိသင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစရိုက်များသူတို့တစ်ဦးချင်းစီ၏ဟိုလေထုမြှင့်တင်ရန်အဖြစ်အားလုံးအရေးကြီးလှသည်။ ကြောင်းပရိုတိန်းအတွက်ပရိုတိန်းဖွဲ့စည်းခြင်းမူလတန်းဖြစ်ပါသည် ကြွက်သား၏အဆောက်အဦပိတ်ပင်တားဆီးမှု ကပိန်တစ်ရှူးဖွဲ့စည်းမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ဆဲလ်ပရိုတိန်းတည်ဆောက်သောနှုန်းနှင့်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုကိုယ်စားပြုသော။
နိုက်ထရိုဂျင်အတွက်တစ်ဦးကချို့တဲ့ထိန်းသိမ်းထားတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောငွေပမာဏအဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုမျက်နှာသာဟိုလေထုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ catabolic ပြည်နယ်, ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါတို့သည်အသွေးတော်နှင့်တဆင့်အောက်စီဂျင်သယ်ဆောင်တာဝန်ရှိသည်နေသောသွေးနီဆဲလ်ရှိသည်။ ပိုများသောသွေးနီဆဲလ်တွေအလှည့်ကျကွီးမွတျကြွက်သားခံနိုင်ရည်မှတူညီပါလိမ့်မယ်အရာထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအသှေးကိုအောက်ဆီဂျင်, မှတူညီပါလိမ့်မယ်။ ဤအစရိုက်များအားလုံးသည်လည်း recover လုပ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌လွန်စွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မည်။
ကာယဗလများအတွက်ခံတွင်း turinabol ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ကာယဗလများအတွက်ခံတွင်း turinabol ၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာလဲ? ရဲ့မြင်ကြကုန်အံ့။
တစ်ဦး puffy ကြည့်စရာမလိုဘဲတင်းကျပ်တဲ့ကြွက်သား
ပြင်းပြင်းထန်ထန် SHBG မှခညျြနှောငျနိုင်စွမ်း
အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအတွက်တိုးလာ
ဒါကြောင့်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောရေ retention ကိုမပါဘဲ, သို့မဟုတ်လည်းအီစထိုဂျင်တစ်ဦးမြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲပိန်ကြွက်သားထုထည်တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်အဖြစ်ဤ Steroid တစ်မျိုးအားကစားသမားအကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
ခံတွင်း turinabol ၏ကြွက်သားအဆောက်အဦအကြိုးခံစားခှငျ့ Dianabol ကဲ့သို့အခြားဟို steroids ထက်လျော့နည်းနေမြဲနေစဉ်, သင်မကြာခဏကာယဗလအားဖြင့် "ထပ်" တွင်အသုံးပြုလျက်ရှိဒီ Steroid တစ်မျိုးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအကြောင်းပြချက်ဟာသူ့ရဲ့ (တက်ကြွစွာ) အခမဲ့တိုးမြှင့်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်း testosterone ဟော်မုန်း အဆင့်ဆင့်ကကျေးဇူးတင်လိင်ဟော်မုန်းစည်းနှောင် globulin (SHBG) ရက်နေ့တွင်သရုပ်ဆောင်။ ဤသည်ကိုအသုံးပြုထားကြောင်းအခြား steroids ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသည်။
ခံတွင်း turinabol ၏အားသာချက်များကဘာလဲ?
Oral turinabol သည် ၄ ​​င်း၏ androgenic အားခန္ဓာဗေဒသက်ရောက်မှုများနှင့်ကွဲပြားစွာခွဲခြားထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏မိခင် Dianabol ဟော်မုန်းထက် ပို၍ အားနည်းသော anabolic steroid ဖြစ်သည်။ သို့သော် Tbol နှင့် ပတ်သက်၍ အာမခံချက်မှာကြွက်သားတည်ဆောက်မှုစွမ်းရည်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုများနှင့်အက်စထရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (အက်စထရိုဂျင်သို့မွှေနှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်) ကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Dianabol ထက်၎င်း၏အားနည်းသောအင်အားကြောင့် Tbol မှသက်ရောက်မှုများကိုထုတ်ယူရန်အတွက်လိုအပ်သောဆေးများကိုအတော်လေးမြင့်မားသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည် (၎င်းကိုဤပရိုဖိုင်း၏ Tbol ဆေးများကဏ္inတွင်မကြာမီရှင်းပြပါမည်) ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလဆိုဖောင်း၏အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှု, gyno, သို့မဟုတ်အခြားအီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတည်ငြိမ်နှင့်အရည်အသွေးပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကျိုးအမြတ်ကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ mass နှငျ့ခှနျအားအကျိုးအမြတ်ကြောင့်ဟိုအစွမ်းသတ္တိ၏၎င်း၏မရှိခြင်းသိသိသာသာဖြစ်သိကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတသမတ်တည်းပေါက်သောမှန်မှန်နှင့်အရည်အသွေးပိန်လာဘ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းလဲရန်၎င်း၏နိုင်ခြင်းမှအဆီဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ် Pre-ပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုကာလအတွင်းမှာတစ်ဦးစံပြဖြတ်တောက်ခြင်းအေးဂျင့်အဖြစ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။ အဲဒါကို run သောအခါခံတွင်း turinabol ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတကယ် SHBG မှခညျြနှောငျရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကြောင့်သည်အခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူ (stacked) အခြားဟို steroids တစ်ခုတွဲဖက်အဖြစ်ထွန်းလင်း။ SHBG မှ binding ကထားပါတယ်အခြားအားသာချက်ဖြစ်သော SHBG က uninhibited ခံရပါကသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ရရှိနိုင်ဖြစ်နှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်အခြားဟို steroids ပိုမိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ပါးစပ်နှင့်ထိုးဆေး turinabol အကြားခြားနားချက်ကိုအခြား steroids အများစုနှင့်အတူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ခံတွင်းယူလွယ်ကူသည်မဟုတ်တဦးတည်းထိုးဆေးဗားရှင်းမြင့်မားဆေးညွှန်းရေရှည်တည်တံ့နိုင်အောင်သီအိုရီကအသည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပွငျထိုးဆေးအနည်းငယ်ပိုမိုတွေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
In ကာယဗလ turinabol တစ်လူသစ်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ် - အတော်လေးစျေးပေါ methandrostenolone (dianabol) ဖြစ်အရှေ့ဥရောပအတွက်အတိတ် "pharmacological ညျရှငျဘုရငျ" တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အရှေ့ဂျာမဏီကနေမှောင်ခိုအားလုံး turinabol အလင်းအားကစားသမားနည်းပြများကဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်းဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကပင်အနည်းဆုံးအဘယ်သူမျှမကာယဗလသူတို့အစဉ်အဆက်အသုံးပြုဖော်ပြခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ရှိကွောငျးမသိခဲ့ပါ။ ဤသည်အလွန်အသုံးဝင်သောမူးယစ်ဆေးတစ်စက္ကန့်အခွင့်အလမ်းပေးသောအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားနိုင်ငံများတွင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမေရိကန်ဈေးကွက်အပေါ်အောင်မြင်မှုနှင့်တိုတောင်းခဲ့ခဲ့ပြီးသည့်အခါအခွအေနေကြောင်းရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။
ဒီအောင်မြင်မှု၏အကြောင်းရင်းများဘာတွေလဲ? at-ပထမဦးဆုံး turinabol အထူးအာဏာကိုထစေ၏။ ကပြောသည်ထားပြီးအဖြစ်ဒုတိယအ, ပါးစပ် turinabol လျင်မြန်စွာခန္ဓာကိုယ်အရွက်များနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏အဆုံးပြီးနောက် 6-8 ရက်အတွင်းဆီးတှငျတှေ့ဘူး။ ကျနော်တို့ turinabol ဘို့မဆိုအပြုသဘော doping စမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုကြားသိကြပြီမဟုတ်။ ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုရိုးရှင်းစွာယနေ့ခေတ်ဖန်ဆင်းခံကြသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့ရာတွင်ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင် feature ကိုရေမဆိုသိသာစုဆောင်းခြင်းမပါဘဲကြွက်သားမှခိုင်မာသောပေးခြင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ အတှေ့အကွုံ turinabol ၏သုံးပြီးပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုထပ်နီးပါးမဖြစ်မနေကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကသံသရာ bulking ပြီးနောက်ပျက်စီးခြင်းကိုဆန့်ကျင်ကြွက်သားထုထည်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားသည်။
turinabol ၏အခြားအင်္ဂါရပ်ရှိပါသည် - က«င်လိင်မူးယစ်ဆေး»။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးမျှမျှတတလျှင်မြန်စွာတစ်ခါတစ်ရံအလွန်အကျွံယောက်ျားများအတွက်လိင်စိတ်တိုးမြှင့်, ဒါလိင်၏အလိုဆန္ဒသင်တန်းများအဘို့အလိုဆန္ဒကျော်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနိုင်အဖြစ်ပဲအနည်းငယ် endogenous testosterone ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုတားစီးနိုင်စွမ်း, အများအကြားအလယ်အလတ်ဆေးများအတွက်ယူပါကအသုံးဝင်မူးယစ်စေသည် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ "လေးလံသော" AAS ၏သံသရာ လိင်-drive ကို.
ခံတွင်း turinabol ထိုးခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး
ခံတွင်း turinabol6တစ်ဦးအနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် 53 တစ်ခုဟိုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်, ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အကျိုးအမြတ်နှိုင်းယှဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စုံလင်သောမြို့အနီးကစေသည်။ ကြောင့်အနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်, ဝက်ခြံ, ကျူးကျော်ကဲ့သို့သောရန်, roid ဒေါသနှငျ့ခှနျအားတိုးရှားပါးသော်လည်း, မပေး Non-တည်ရှိသောသူဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မိဘဟော်မုန်း Dianabol နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆီးအတားမရှိဟိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ကာယဗလအေးဂျင့်ရရှိမှုတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်အဖြစ်ခံတွင်း Tbol မမြင်မိပါဘူး။
ခံတွင်း turinabol ၏သောက်သုံးသောအကြံပြု
ခံတွင်း turinabol posses testosterone ၏အကြမ်းဖျင်းတစ်ဝက်ဟို rating, ဒါကြောင့်ဘုံခံတွင်း turinabol ၏သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 20-40mg ၏အကွာအဝေး၌တည်ရှိ၏အကြံပြုပါသည်။ ခံတွင်း turinaboldosages တစ်နေ့လျှင် 40-80mg ကျော်လွန်နိုင်ပေမယ့်ကာယဗလအကျိုးအမြတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေတုန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထရန်စတင်သတင်းပို့ပါ။
ခံတွင်း turinabol ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသောက်သုံးသော
ခံတွင်း turinabol ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးများတစ်နေ့လျှင် 5-10mg န်းကျင်ဖြစ်ကြပြီးကြွက်သားဖြုန်းရောဂါများနှင့်အတူသူတို့အားပေးတော်မူ၏။ အမျိုးသမီးဆေးဘက်ဆေးများတစ်နေ့လျှင် 1mg မှာ start နှင့် (QC) နေ့စဉ် 2.5mg ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်။
ကာယဗလများအတွက်ခံတွင်း turinabol ၏သောက်သုံးသော
Beginner တွေခံတွင်း turinabol ဆေးများတစ်နေ့လျှင် 20-40mg မှာအကြံပြုသည်။
အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူများကနေ့စဉ် 40-60mg ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလတစ်နေ့လျှင် 80mg ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုသင်ပိုကောင်း 80mg / နေ့ထက်မပိုင့်, သို့သော်ဤပိုပြီးအစွန်းရောက်ဆေးများပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အခြားအန်ဒရိုဂျင်ပိုကောင်းအကျိုးအမြတ်နှင့်အတူသုံးနိုငျစေနိုင်ပါတယ်။
အရှေ့ဂျာမန်အမျိုးသမီးအားကစားသမားများသည်တစ်ကြိမ်လျှင်နှစ်ပတ်မှခြောက်ပတ်အထိတစ်နေ့လျှင် ၅-၁၅ မီလီဂရမ်ဖြင့် OT သောက်သုံးကြသည်။ ဤအားကစားသမားအမျိုးသမီးအများအပြားသည်အသည်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြdeathနာများနှင့်သေခြင်းပင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Oral Turinabol သည်အမျိုးသမီးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသော anabolic steroid မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ ငါဒီအကျိုးဆက်တွေကိုမလွှဲမရှောင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါကသက်သေပြနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီလိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာအလွန်တရာကြီးပါတယ်။
(သာရည်ညွှန်းများအတွက်) Turinabol စက်ဘီးနှင့်အသုံးပြုခြင်း
ခံတွင်း Turinabol သံသရာ
injection Turinabol သံသရာ
ပါးစပ် turinabol ၏ stack
ဒါဟာထပ်ဖြတ်တောက်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အားကစားသမား, အလေးမအားကစားသို့မဟုတ်ကာယဗလဘို့ကောင်းပါတယ်။ လေးနက်သောအဆီ-မီးလောင်လိုအပ်ပါကက Steroid တစ်မျိုး, မသန့်စင်သောအဆီ-burner င်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ် deca-dianabol-testosterone ဟော်မုန်းသံသရာ၏အဆုံးမှာသုံးပတ်ကြာ 1) Turanabol 35 မီလီဂရမ် / ED
2) Turanabol 50 Parabolan နှင့်အတူ6ပတ် / ED mg) ဖြစ်နိုင်သည်သံသရာ၏အစအဦးအနေဖြင့် (200-150 ပတ်သံသရာရဲ့အဆုံးမှာ (2 / w mg) နှင့် / သို့မဟုတ် Stanozolol (3 မီလီဂရမ် / w)
3) Turanabol ကို standalone သံသရာ 506ပတ် / ED MG ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် / Pre-ယှဉ်ပြိုင် stack အမှီ။
ပြင်ဆင်မှုစဉ်အတွင်း 4) turinabol မကြာခဏ trenbolone, oxandrolone သို့မဟုတ် stanozolol နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် stacks ။ အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကို testosterone ဟော်မုန်း propionate နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။
5) ပါးစပ် turinabol + oxandrolone များ၏ပေါင်းစပ်သာမိန်းမတို့အဘို့အကြံပြုနိုင်ပါသည်လွန်းအားနည်းသည်။
6) သငျအစား methandrostenolone (dianabol) ၏, testosterone ဟော်မုန်း, nandrolone သို့မဟုတ်တို့ကိုပေါင်းစပ်နှင့်အတူဥပမာအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်အတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်-ရရှိမှုသံသရာကာလအတွင်းပါးစပ်နှင့်ထိုးဆေး turinabol ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအရည်အသွေးကိုကြွက်သားရချင်သောသူတို့အားအားကစားသမားများအတွက်အကြံပြုသည်။
ခံတွင်း turinabol တစ်ဝက်ဘဝ
သိပ္ပံနည်းကျစာပေများတွင်ခံတွင်း turinabol ၏ဝက်ဘဝ IV အုပ်ချုပ်ရေး 16 နာရီအကြာတွင်; သို့သော်ပါးစပ် turinabol ဝက်ဘဝသေချာပေါက်အတူတူပင်မဟုတ်ပေ။ ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဝက်ဘဝသို့သော်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အမှန်တကယ် IV ထိုးနှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ပထမဦးဆုံး Pass နှင့်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချအထွတ်အထိပ်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်မှတိုတောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ကြာကြာ IV အုပ်ချုပ်ရေးထက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စက္ကူတစ်ဦးမျှမျှတတတိုတောင်းသောဝက်ဘဝအကြံပြုထားသည်။ A ကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက် 12 နှင့် 20 နာရီအကြားဖြစ်နိုင်ဖွယ်စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကိုနှင့်အတူဤ Steroid တစ်မျိုး၏ထက်ဝက်-အသက်အဘို့အနည်းဆုံးရှစ်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ်ရာတစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝက်အသက်အဘို့အစောဒကတက်ပြီးနောက်ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏ metabolites အချိန်ကြာမြင့်စွာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။
ခံတွင်း turinabol ၏ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
Turinabol အဆိုပါ mildest တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည် ဟို steroidsဒါကြောင့်မကြာခဏကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစားထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါသည် Anavar နှင့် Primobolanဒီ Steroid တစ်မျိုးသင့်ရဲ့အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ် .Using ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေသုံးစွဲဖို့အတှကျအလုံခြုံဆုံး steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘေးကင်းထက်နေစဉ် အများအပြား steroids, ခံတွင်း turinabol သုံးပြီးအန္တရာယ်မရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာတွင်ကြုံတွေ့ရပေမည်ခံတွင်း turinabol ၏အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၏ဖိနှိပ်မှု
တိုးမြှင့် LDL (မကောင်းတဲ့) လက်စထရော
HDL (ကောင်းသော) လက်စထရောလျော့ကျ
ကလေးမွေးဖွားကိစ္စများ / အောက်ပိုင်းသုက်ပိုးအရေအတွက်
တစ်ဦး Steroid တစ်မျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလားအလာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သေချာပေါက်သင်သည်ထိုသူတို့တွေ့ကြုံခံစားကြလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်။
သဘာဝ testosterone ၏ဖိနှိပ်မှု
အများအပြားဟို steroids ကဲ့သို့မိမိတို့အသုံးပြုမှုလျော့နည်း testosterone ဟော်မုန်းကိုထုတ်လုပ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးသံသရာအဆုံးသတ်ထားပါတယ်တခါတခါတလေသင့်ရဲ့အဆင့်အတန်းပုံမှန်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအစဉ်အမြဲအမှုမဟုတ်ပါဘူး။
အနိမျ့ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်အဆီတိုးနည်းကြွက်သားထုထည်အပါအဝင်ပြဿနာများကိုတစ်ဦးနံပါတ်တစ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောအနိမ့်လိင်စိတ်နှင့်အောက်ပိုင်းသုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်လွန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။
ခံတွင်း turinabol အသုံးပြုခြင်းအနေနဲ့ LDL လက်စထရောအတွက်တိုးခြင်းနှင့်နိမ့် HDL လက်စထရောကျစေနိုငျပါသညျ။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းအဖြစ်ရောဂါများဆီသို့ဦးတည်နိုင်သည့်သင့်ရဲ့သွေးလွှတ်ကြောများတွင်အပ်နှံ plaque ၏ပမာဏကို, တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
သင်လက်ရှိမြင့်မားသောလက်စထရောအဆင့်ကိုခံစားနေရလျှင်တစ်ဦးဟို Steroid တစ်မျိုးကိုသုံးပြီးအကြံပြုသည်မဟုတ်။
ပိုပြီးဖက်တီးငါး (Omega-3 ဖက်တီးအက်ဆစ်) အစာစားခြင်း
သည်အခြားပါးစပ် steroids နှင့်အတူဖြည့်စွက်မ
အတော်များများကဟို steroids hepatotoxic ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခံတွင်း turinabol မျှကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ liver.This အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုပမာဏကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်အသုံးပြုခြင်းသေချာပေါက်သင်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်သင်တို့၏အသည်းကိုပျက်စီးစေပါလိမ့်မယ်ဆိုလို, သို့သော်သင်စတင်ရန်ကျန်းမာအသည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ဖြစ်လျှင်ဤ Steroid တစ်မျိုးအကောင်းဆုံး avoided.It ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးကိုလည်းရှောင်ရှားရန်အကြံပြုသည် အရက်၏ပိုလျှံပမာဏစားသုံး, သင်၏သံသရာအကြံပြုထားတဲ့အချိန်ထက်မပိုပါဘူးသေချာစေရန်။
ခံတွင်း turinabol အမှုန့်ဝယ်ယူ
ဘယ်မှာခံတွင်း turinabol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?စဉ်းစားရမယ့် questin ကောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ သင် Torinabol အမှုန့်ကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ အရည်အသွေးနှင့်မတူသောစျေးကွက်တစ်ခုသို့သင်ဝင်ရောက်နေသည်။ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဒေသတွင်းဆေးဆိုင်တွင်တိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ Online ооз Turinabol ကိုမှာယူနိုင်သည်။ မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းဗားရှင်းရနိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေးသူရှိပါကယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူရှိပါကသင် AAS သည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
6477 Views စာ
levitra ပိုမိုထိရောက်စေရန်မည်သို့ အမျိုးသမီး Viagra? အဆိုပါလိင် Enhancer Flibanserin အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို